DAAWO VIDEO DEG DEG Xildhibano Iyo Shacab Mandhera kenya Janan Xoog Uga Saray,Farmaajo Tageeray"Somaliya Xisaab sanahay" - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO DEG DEG Xildhibano Iyo Shacab Mandhera kenya Janan Xoog Uga Saray,Farmaajo Tageeray”Somaliya Xisaab sanahay”
DAAWO VIDEO DEG DEG Xildhibano Iyo Shacab Mandhera kenya Janan Xoog Uga Saray,Farmaajo Tageeray”Somaliya Xisaab sanahay”
March 3, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal 2
DAAWO VIDEO DEG DEG Xildhibano Iyo Shacab Mandhera kenya Hanan Xoog Uga Saray,Farmaajo Tageeray
DAAWO:- Wasiirka arimaha Gudaha Somaliland oo looga shaki qabo inuu ka dambeeyay qaraxii ka dhacay Laascaanood
Nin rabay inuu is qarxiyo oo lagu qabtay isaga iyoo qaraxyadiisi Baydhaba.
Sidii aan marar badan bidhaamiyay Madaxweyne Farmaajo labada khusladood oo dadka isaga u soo jiidaya waa daacadnimadiisa iyo waddaniyaddiisa aanu shakigu ku jirin. Anigaygan baa ka mid ahaa dadkii aadka ugu riyaaqay markii la doortay. Nasiib darro se siyaasaddu labadaas oo keli ahi ma socodsiiyaan oo waxay galaysaa baabka maahmaahdii ahayd “Rabbi ka cabso oo rag na iska dhici meel ma wada galaan”. Astaamo kale oo dhowr ah ee ay fariidnimadu, fiiradheeridu iyo foojignaantu gundhigga u yihiin ayaa laga ma maarmaan ah. Sida iiga muuqata Farmaajo daacadnimadiisa qaawan ayaa isaga ku noqotay iinta hoggaanka iyo xukuumadda ba ka curyaaminaysa.
Sababtu waxaa weeye in uu noqday nin aan halaqyada musaska ugu dhabbacan ka taxadarsanayn ilaa ay maradiisa toos ugu galaan. Qawsaaradii iyo qawleysatadii dalka Soomaaliya burburka ku keenay ayaa weli dhagrahoodii maleegaya oo Farmaajo daacadnimadiisa u arka tiriigga iyaga qabanaya ee kashifaya. Sida laga dheehan karo qaabka uu madaxda Jubbaland iyo Puntland u la dhaqmayo, Farmaajo waxay ka tahay ha laguu arko nin eex qabiil salam ka ah ee Soomaalida u siman. Waxaa se seeggan in kuwaa kale ee uu iska gadayo aanay abaal ba ugu hayn ee ay u adeegsanayaan liidnimo ay dhagrahooda qummaati ugu fushadaan.
Farmaajo waxaa si xun oo laga tiiraanyoodo u seegtay in uu shaxdiisa hab shaadirnimo lagu dheehay u dheelo si aanay hufnaantiisu isaga ku noqonin hoosaasin cadowgiisa iyo nacabka qaranka Soomaaliya u jabinaya. In kasta oo ay Daaroodku waa hore ka soo gudbeen cunfigii iyo colaadihii dagaalkii sokeeye oo ay naf iyo maal ba dul dhigeen in ay Soomaalinimadu jiritaankeedu sii sugnaado ayaa waxaa dharaarta sideeda u cad in ay qolyihii qabta sababay weli 1991kii taagan yihiin. In uu Farmaajo Jubbaland iyo Puntland isku diro nacasnimo weyn iyo maangaabni xun ayay ku tahay marka jawiga siyaasadeed ee dalka qummaati loo cabbiro waayo kuwa uu iska gadayo ayaa isaga gaadmo ba’an ugu jira. Lataliyeeal khaas ah oo xaqiiqadan dhabta ah u bidhaamiya ayuusan lahayn.